बोनस सेयरको दर्ता २९ प्रतिशतले बढ्यो, गत वर्ष २१ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको दर्ता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २१ अर्ब ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आव ०७१/७२ को तुलनामा ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले धेरै हो । गत आव...
राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वारा आशा लघुवित्त वित्तीय सस्थाको उद्घाटन
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नुवाकोटको जुरेथुममा स्थापना भएको आशा लघुवित्त वित्तीय सस्थाको उद्घाटन गर्नुभएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले यो लघुवि...
आइपीओमा अचाक्ली माग ! तीन दिनमा १ अर्ब ८६ करोडको आवेदन
काठमाण्डौ । सूर्योदय लघुवित्त बित्तीय संस्थाले खुलाएको १ करोड २० लाख मूल्यको आइपीओमा तेश्रो दिनसम्ममा करिब १ सय ५४ गुणा बढी आवेदन परेको छ । मागभन्दा अत्यधिक बढी आवेदन परेपछि कसलाई कति कित्ता सेयर पर्छ...
नाडामा हिमालयनको सरल सवारीसाधन कर्जा
काठमाडौं । हिमालयन बैङ्कले नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी सरल सवारीसाधान कर्जा ल्याएको छ । बैङ्कले अटो शो अवधिभरका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण योजना ल्याएको हो । सो अवधिभर बैङ्कबाट साढे ६ प्रतिशत ब्याज दरम...
कुँडहरमा पोखरा फाइनान्सको शाखा
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले पोखरा–१४, कुँडहरमा शाखा सञ्चालन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क पोखराका प्रमुख चिरञ्जीवी चापागार्इंले मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रमबीच उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन्...
सिटिजन्सद्धारा नेपाली हजयात्रीहरुलाई विशेष सुविधा
काठमाडौं । मुस्लिमहरुको पवित्र धार्मिक स्थल मक्का÷मदिनामा जानुहुने तीर्थालु नेपाली हजयात्रीहरुको सुविधाको लागी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले हजयात्रीहरुलाई आवश्यक पर्ने साउदी रियाल सटही सुविधा प...
एपेक्सले १५ प्रतिसत संस्थापक सेयर रुपान्तरण गर्ने
काठमाडौं । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैकले १५ दसमलव ५१ प्रतिसत संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तण गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैकको निर्देशन अनुसार सबै किसिमका बैक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले संस्थापक तथा साधा...
रिलायबलले ल्यायो हायर पर्चेज कर्जा
काठमाण्डौ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले हायर पर्चेज कर्जामा विशेष योजना ल्याएको छ । बैंकले निजि तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरुलाई जस्तै कार, बस, ट्रक, क्रेन, डोजर, ट्यांकर, एक्स्काभेटर आदि खरिद ग...